December 14, 2021 sonsonlinlin 0
ဒီအချက် (၇) ခုကြောင့် သင် ညဘက်တွေမှာ အိပ်မပျော်ဖြစ်တာပါ အိပ်ချိန်မမှန်တာတွေက သင့်ကို ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေတဲ့အပြင် သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည်ကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အရွယ်ရောက်သူတွေရဲ့ (၃၅%) ကတော့ အိပ်ချိန် (၇) နာရီသာသာပဲ ရှိပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက သင့်ဦးနှောက်ကို ရှူပ်ပွစေပြီးတော့ အကျိုးဆက်ကတော့ သင့်ကို အိပ်ရေးပျက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့် ညဘက်တွေ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်နိုင်အောင် ဘာတွေဆောင်ရ ရှောင်ရမလဲ ဆိုတာကို love media […]
မိမိေငြ အဝင္မ်ားဖို႔ အထြက္နည္းဖို႔ လာဘ္ေကာင္းဖို႔ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ဖို႔ ကံတက္ေစဖို႔ ေငြကိုဘယ္လိုထားမလဲ
ငွေကိုဘယ်လိုထားမလဲ? ငွေကို ပိုက်ဆံအိတ် အံဆွဲမီးခံသေတ္တာ စသည်မှာထားပါတယ် …ဒါပေမဲ့…ထားတဲ့နည်းစံနစ် လိုပါတယ်.. မိမိငွေ အဝင်များဖို့…အထွက်နည်းဖို့…လာဘ်ကောင်းဖို့ လုံခြုံစိတ်ချဖို့ ကံတက်စေဖို့… အဝင်ကောင်း သလိုအထွက်လည်းကောင်းသောနည်းနဲ့သာ ထွက်ဖို့ ..ဖုန်းရွှေFung Shui ပညာက အခုလိုအကြံပြုပါတယ်.. ☘️၁☘️ကရဝေးရွက် နဲ့အတူထားပါ…အကျိုးအနာ မပါသော ကရဝေး ရွက် အနည်းဆုံး တစ်ရွက်နဲ့ အတူထားပါ…ငွေပွားများ လာစေပါတယ်… ☘️၂ ☘️အကျိုးအနာမပါတဲ့ဆန်စေ့ ၂၁ စေ့ကို ပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးနဲ့ထုပ်ပြီး ငွေနဲ့အတူထားပါ.., လာဘ်ပွင့်လန်းစေတဲ့အပြင်မလိုအပ်ပဲငွေထွက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်…. ☘️၃ […]
လက်သူကြွယ် လက်ချောင်းအောက်မှာ ဒေါင်လိုက် မျဉ်းတိုကလေး အဖြစ်တည်နေမယ်ဆိုရင် သူ က လက်သူကြွယ် လက်ချောင်းအောက်မှာဒေါင်လိုက် မျဉ်းတိုကလေး အဖြစ်တည်နေမယ် လ က်သူကြွယ်လက်ချောင်းပိုင်နယ်မြေက တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္ဂနွေ ဆိုတာက သူရဇ္ဇလို ့ခေါ်တဲ့နေမင်း ၊နေမင်းဆိုတာက သည်မြေကမ႓ာ၏ တန်ခိုးရှင် (တန်ခိုး ) ဆိုတာက တရုပ်ဘာသာစကား အလင်းလို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ် —-အဲ့တော့သည်ဒေါင်လိုက်မျဉ်းတိုကလေးကနေမင်းလို အလင်းပေးတဲ့ တန်ခိုး လမ်းကလေးပေါ […]
ရိုးရိုးမွေးမဲ့ မေမေတို့ရဲ့ အမေးများဆုံး မေးခွန်းများ ၁ ။ မိန်းမကိုယ်ချဲ့တာနာလား မနာပါဘူးနော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မွေးခါနီးရင် မိန်းမကိုယ်က နာတာတွေ မေမေတိုင်း ကြုံရပါတယ် တကယ်မွေးတဲ့အချိန်ကျရင်လည်း မိန်းမကိုယ်က ကျင်ထုံနေတာနဲ့ ချဲ့လိုက်တာ သိနေရပေမဲ့ လုံးဝမနာပါဘူး ၂ ။ ပြန်ချုပ်ရင်ရော အစိမ်းချုပ်တာလား နာလား ပြန်ချုပ်ရင်လည်း ထုံဆေးနဲ့ချုပ်ပေးတာပါ ထုံဆေးကလည်း ဆေးထိုးအပ်နဲ့ထိုးရတာ မဟုတ်ပါဘူးနော် ထုံဆေးအရည်ကိုသုံးတာပါ ထုံဆေးအရည်လောင်းလိုက်ချုပ်လိုက်လုပ်တာမို့ လုံးဝ မနာပါဘူး ၃ ။ […]
လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ခရီးအတွက် တကယ့်ကိုလိုအပ်ပါတယ်
ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးဖူးလား ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ပေးဖူးပါတယ် ရှက်စရာပေမဲ့ ပြောရဦးမယ် ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးဖူးလား ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ပေးဖူးပါတယ် စလုပ်တုန်းကတော့ရှက်တာပေါ့ ဘဝမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံးမှုတ်ပေးဖူးတာလေ..မသင့်တော်ဘူးထင်ရပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ခရီးအတွက် တကယ့်ကိုလိုအပ်ပါတယ် အထူးသဖြင့် မိန်းမသားဘက်က ကိုယ့်ယောကျ်ားကိုအားနာလို့သာ မလုပ်ခိုင်းရင်နေမယ် သူတို့အတွက်ကတော့ တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ် အချိန်တိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူး ရေမိုးချိုးသန့်စင်ပြီးမှ မှုတ်ပေးရတာပါ မဟုတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးလေ.. နှစ်ယောက်သားရဲ့အချစ်ခရီးကို ပိုခိုင်မြဲစေတာမှန်ပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ပါ မှုတ်တဲ့အချိန်ကအသံထွက်နိုင်တာမို့ အထူးဂရုစိုက်ရပါတယ် ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးနေပေမဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောက်အယှက် ပေးမိသလိုဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးလေ ညဘက်လူခြေတိတ်ချိန်ဆိုသိသာတယ်ဗျ စောစောလေးလုပ်ကြပါ […]
၄ႀကိမ္သုံး႐ုံျဖင့္ သိသိသာသာ ဆံပင္မဲနက္ ၊ဆံပင္အကြၽတ္ရပ္ၿပီး မ်က္ခုံးေမႊးေလးေတြပါ ေပါက္လာ…
၄ခါအသုံးပြုရုံနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ရပ်၊ ဆံပင်မဲနက်သန်စွမ်းစေပြီး မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေပါ ပေါက်လာစေသောနည်း2ပါတ်အတွင်း ၉၅% ဆံပင်ကျွတ်သက်သာ၊ဆံပင်မဲနက် သန် စွမ်းစေပြီး မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေပါ ပေါက်လာစေတဲ့ သဘာဝနည်းလေးဒီနည်းလေးက ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားပြီး တကယ်ထူးခြားလို့ တင်ပေးဖြစ်တာပါ။ ၄ခေါက်လောက် အသုံးပြုရုံနဲ့ ဆံပင် ၉၅%အကျွတ်သက်သာ မဲနက်သန်စွမ်းစေပါတယ်။ အရင်က ဆံပင်တွေ ကျွတ်တာ ထိပ်ပါပြောင်တဲ့ အထိပါ။ ဆေးနည်းပေါင်းစုံ ကုခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ ထိပ်ပါပြောင်ပြီး ဆံပင်တအားကျွတ်လို့ အစခံရတဲ့အထိပါ။ ခုဒီနည်းလေးကို စမ်းသပ်တာ […]
သင္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ လက္စြပ္ဘူးေလးကေျပာျပေပးမယ့္ သင့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္အေၾကာင္း
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လက်စွပ်ဘူးလေးကပြောပြပေးမယ့် သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အကြောင်း နံပါတ် ၁ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က သင့်အပေါ်မှီခိုတာမျိုးမရှိဘဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။ သူ့ဘဝမှာ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတိုင်း သင့်ကိုပါအမြဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ သင့်ကိုလည်း လိုက်ချုပ်ချယ်တာမျိုးမလုပ်ပဲ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပေးထားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ကို အဖက်ဖက်က ကူညီပံ့ပိုးတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးတက်ပါသေးတယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က သင့်ကိုပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးပြီး သင့်ရဲ့ဘေးနားမှာ အမြဲကောင်းအတူ၊ ဆိုးအတူ ရှိနေပေးတတ်ပါတယ်။ နံပါတ် ၂ […]